‘waa’ee Finfinnee furmaata ijibbaataa kennuuf hojjenna’-obbo Dawuud Ibsaa |
Home Afaan Oromoo ‘waa’ee Finfinnee furmaata ijibbaataa kennuuf hojjenna’-obbo Dawuud Ibsaa
‘waa’ee Finfinnee furmaata ijibbaataa kennuuf hojjenna’-obbo Dawuud Ibsaa
(BBC Afaan Oromoo) — Finfinneen bu’uura seenaa irratti hundaa’uudhaan bulchiinsa Oromiyaa jala akka galtuuf hojjenna jedhan hayyuu dureen ABO Obbo Daawud Ibsaa.
Hayyu dureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa, kora uummataa magaalaa Ambootti qophaa’e kanarratti ABO’n erga fulbaana 15 bara 2018 gara biyyaa galee kaasee qabsoon Kara nagaa gaggeessuuf uummata waliin ‘filaa fi Rifeensa’ ta’ee hojjechaa jira jedhan.
Ta’us ”miseensota keenya bakka garagaraa jiran irraa ammayyuu hidhaan hin dhaabbanne” jedhan.
‘Boordii filannootti galmaa’uufi filannoo dhufuuf qophaa’aa jirra’
Filannoo dhufu kuni boqonnaa sadii’ yeroo qophii, filmaataa fi filannoon booda’ jiran irratti nagaan akka xumuramuuf hunduu gahee bahuu qaba jedhan.
“Uummanni keenya sirnaan galmaa’uu, gaafa filannoos paartii barbaadu dhiibbaa malee akka filatuuf deemsa filmaataa kana keessatti qooda guddaa gumaachuu qabu” Jedhan.
ABOn imaammatoota seektara adda addaa qopheeffatee filannoof qophaa’e jiraachuu kan himan Obbo Daawud, dhaabbilee biroo waliinis qindoominaan hojjenna jedhan.
“Dantaa uummata Oromoo fi saboota biroo Oromiyaa keessa jiranii kabachiisuuf sodaa tokko malee Oromiyaa keessa sochohaa jirra” Jedhan.
Ji’oota jahan darban paartiilee Kudhan waliin mariyachaa akka turanii fi mudden darbe sanada waliigaltee mallatteessuus yaadachiisan.
ABO’n jaarsolii biyyaa, bakka bu’oota saboota biroo waliin dhimma nagaa fi filannoo irratti mari’achuuf qophii gahaa qabaachuus eeran.
Dhimmootni akka nagaa biyyaalessaa, Afaan Oromoo, mirgoota dhuunfaa fi waloo, dhimma qabiinsa lafaa, waa’ee magaalaa Finfinnee, carraa hojii dargaggootaa, wabii nyaataa dhimmoota ijoo dhaabichi irratti fuullefatu ta’uu eeran.
Caasaan nageenyaa sirrachuu akka qabuu fi dimokiraasiin dhugaa akka lafa qabatuuf akkasumas,sirni federaalizimii cimaan akka jiraatuuf akka hojjetanis eeran.
“Sirni federaalizimii sabdaneessaa akka ofduuba hin deebineef hojjechuun tokkummaa fi daangaa Oromiyaa tiksuun ittigaafatamummaa hunda keenyaatis” jedhan.
Uummanni Oromoo saba biraa keessa jiraatan mirgi isaanii eegamee nagaan akka jiraataniif akkasumas, saboonni biroo Oromiyaa keessa jiran nagaan akka jiraataniif gahee keenya nibaana jedhan.
” Afaan Oromoo Afaan federaalaa dhugaa akka ta’uuf halkaniifii guyyaa hojjenna” Jedhan.
ABO’ qabeenyi lafarraafi Lafa jalaa qabeenya waloo uummataa ta’uutti waan amanuuf imaammatni lafaa nuti hordofnu qonnaan bulaan lafa akka qabeenya dhuunfaa isaatti guutumatti kansaa ta’ee mirga guutuu irraatti kan qabaatudha jedhan.
Dhimma Finfinnee irrattis “Finfinneen handhuura Oromiyaa fi biyyaa waan taateef siyaasa belbeltuu waan ta’eefis dhimma kanaaf furmaata ijibbaataa kennuuf hojjenna” Jedhan.
ABO fi KFO’n kora federaalizimii Maqaleetti qophaa’erraa maaliif hafan?
Waa’ee Daawud Ibsaa kana beektuu?
“Haala qabatamaa seenaa irratti hindaa’uudhaan Finfinneen bulchiinsa naannoo Oromiyaa jalatti akka caaseffamtuuf qabsoofna” jedhan.
Uummanni Filmaata dhufurratti dhaaba isaanii cinaa dhaabbatanii akka deeggaraniifis waamicha dhiheeffatan.
” Galfatni qabsaa’ota ABO wareegamii galmaan gahuufi cunqursaa jaarraa tokkoofi walakkaa irraa obbaafachuuf carraan qabnu filannoo kana. Carraan kuni akka nundarbine nutumsaatii mootummaa uummataaf abboomamu hundeessina” jedhan.
Kora ABO’n magaalaa Ambootti qopheesse kanarratti miidhaa barattoota Oromoo naannoo Amaaraatti baratan irra gahaa jiruuf barattoonni komii qaban dhageessisaniiru.
Marii walitti baquu ABO fi KFO
KFO bakka bu’uudhaan sagantaa kanarratti kan argaman miseensi hoji raawwachiiftuu dhaabichaa Obbo Tesfaayee Fufaa, qabsoon keenya ifa xiqqoo mul’ise malee karaa dheeraatu nuhafa jedhan.
” Filannoo dhufu kuni haqa qabeessa akka ta’uf waldhabdee uumamu kan furu manni murtii walaba ta’e jiraachuu qaba. Hanga manni murtii bilisa ta’e hin jiraannetti filannoo walabaa yaaduun guddaa ulfaata” jechuun yaaddoo qaban ibsan.
” filannoo kana duraa kan files kan moo’ates hin turre. Kan ammaa kuni garuu walaba akka tauuf qeerroon qoophaa’uu qaba. ” jedhan.
ABO fi KFOn mariirra jiraachuu kan himan Obbo Tasfaayeen, marii kana milkaa’inaan xumurree oduu Gammachu isaa uummata keenyaf ibsina jedhan.
Kora kanarratti Obbolaan qabsaa’aa Laggasaa Wagii aadde Itaafarraa Wagii fi obbo Baqqalaa Wagii argamanii turan
Previous articleGabaasa ‘OSG’: ‘Ji’oota jahaan darban Oromoonni 64 ajjeefaman’
Next articleProminent Oromo freedom advocate, Dr. Asaffaa Kuruu Jabanaa, dies